अमेरिकामा सक्रिय नेपाली डाक्टर केशव पौडेल भन्छन्ः 'अमेरिकामा भयाभह,नेपालमा तिन काम गरे महामरीबाट जोगिन्छ’ - Bishwo Khabar
१६ वर्षअघि अमेरिकामा गएर डाक्टरी पेसामा आवद्ध डा. केशव पौडेल अहिले निकै व्यवस्त छन् । उनी पछिल्लो ६ वर्षदेखि अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोस्थित लेवलस हस्पिटलमा कार्यरत छन् । एनआरएनए अमेरिकाको २ पटक अध्यक्ष भइसकेका पौडेलकै अगुवाइमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र रोकथामका उपायहरूबारे छलफल र परामर्श गर्नका लागि समितिसमेत गठन गरिएको छ । कोरोनाको डर र त्रास त कसलाई छैन होला र ? डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी सबैलाई छ । हुँदाहुँदै पनि काम भने छाड्नुभएको छैन बरु यसै समयमा बढी काम गर्नुपरेको छ ।
जहाँबढी संक्रमित छन्, डाक्टरको उपस्थिति त्यहीँ धेरै छ । रोगीलाई जीवन दिन खटिने डाक्टर, नर्सहरू आफैँले ज्यानको जोखिम लिएका छन् । थुप्रै डाक्टर, नर्सहरू संक्रमित भएका छन्, केहीको मृत्यु नै भएको छ ।
अहिले विश्वमै कोरोनाको कारण संक्रमित र मृतकको संख्या सबैभन्दा बढी छ । अमेरिकामा नेपालका दर्जन बढी डाक्टरहरू अहिले कोरोना पीडितहरूलाई उपचार गराइरहेका छन् । त्यसो त उनी सधैँ व्यस्त थिए । अहिले भने थप व्यस्त छन् । हस्पिटलमा व्यस्तता बढेका बेला आफन्तले चासो बढी दिएका छन् । दिनमै एक सयभन्दा बढी नेपालीले सम्पर्क गर्छन् उनलाई ।
पौडेल भन्छन्, ‘डर नै नहुने भन्ने त कहाँ हुन्छ र ! म आफू पूर्ण रूपमा तयारी भएर, पापीई लगाएर, चस्मा, पञ्जा, जुत्ता लगाएर उपचारमा खटिन्छु तर म मात्र त्यसरी सतर्क भएर पुग्दैन । मसँग बस्ने सबै यसैगरी सतर्क हुन आवश्यक छ’, पौडेल थप्छन्, ‘सबैले केही नबिराई काम गर्दा ठीकै छ, एक जनाले मात्र पनि सामान्य रूपमा बिरायो भने सिंगो टिमलाई डर हुन्छ ।’
अस्पतालमा रहेका बिरामीमा भय र त्रास बढी पाइने गरेको उनको बुझाइ छ । ’कोरोना देखिँदा म सकिएँ भन्ने किसिमको भाव देखिन्छ, मान्छे काँपिरहेको हुन्छ, बडबडाइरहेको देखिन्छ’, डा. पौडेलले भने । त्यसो त धेरै संक्रमित उचार नै नगरी निको भएका छन् । केही सामान्य उपचारबाट निको भएका छन् । सजग हुँदा ८० प्रतिशत संक्रमित घरमै निको हुन्छन्।
कस्तो छ अमेरिकाको अबस्था
अमेरिका अहिले विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको राष्ट्र हो । मृत्यु पनि सबैभन्दा धेरै रहेको छ त्यहाँ । हामीले यो सामाग्री तयार गर्दासम्म ७ लाख ५० हजार मानिस संक्रमित भएका छन् भने ५० हजारका नजिक मानिसको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा पनि परीक्षणको अवस्था निकै न्यून मात्र रहेको छ । पौडेल भन्छन्, ’८ लाख नजिक संक्रमित देखिएको अवस्थामा २०–२१ लाख जनाको परीक्षण भएको होला । यस हिसाबले परीक्षण गरिएका २५ प्रतिशत मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । कुनै क्षेत्रमा भने स्याम्पल परीक्षण तथा धेरै लक्षण देखिए परीक्षण गर्ने कार्य अहिले गरिएको छ ।
अमेरिकामा रहेको नेपालीको अबस्था कस्तो छ ?
कोभिड १९ को संक्रमणबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको यो अबस्थामा अमेरिकास्थित नेपाली समुदायमा पनि यसको असर भयावह रुपमा बढी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफु सुरक्षित रहेर अरुलाई सहयोग गर्ने काममा लागी परिरहेका छन् । स्वास्थ्य परामर्श र जिज्ञासाको चापलाई दृष्टिगत गरी यस सेवालाई अझै प्रभावकारी र उपलब्धि मुलक बनाउन नेपाली समुदायका निरन्तर रुपमा जिज्ञासाहरुको समाधान गर्ने काममा लागी रहेका छन् ।
नेपालीहरुको चाप रहेको न्यूवर्क क्षेत्रमा कोडिट १९ को नराम्रो प्रभाव परेको छ । बिषम परिस्थितिमा आफ्नो अत्यन्त ब्यस्त समयका बाबजुद नेपाली समुदायका लागी पर्ने डाक्टर हुन् केशव पौडेल ।अमेरिकामा नेपालीहरुको समस्याहरुका विषयमा अहोरात्र काममा खठिरहेका छन् । आफ्नो पेशासंगै विहानदेखी अबेर रातीसम्म नेपालीहरु समस्यालाई लिएर काममा परिरहेका छन् ।
हालसम्म १ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणमा परेका छन् । ६० जनाभन्दा बढी उपचारबाट घरमा फर्केका छन् । १० जना भ्यान्टिलेटरमा उपचारत् छन् ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोनबाट एक लाख नेपाली प्रभावित
रिपोर्ट नेगेटिभ, कोरोना पोजेटिभ पनि हुन सक्छ
डाक्टर पौडेलका अनुसार अहिलेको विधिबाट गरिएको परीक्षणले ७० प्रतिशत मात्र कोरोना संक्रमित भेट्टाएको छ । ‘नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्, पीसीआर प्रविधिबाट अहिले बढीले परीक्षण गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा ३० प्रतिशतत रिपोर्ट नदेखिन पनि सक्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘कोरोना पोजिटिभ नदेखिए पनि कतिपयलाई कोरोना हुने सम्भावना हुन्छ।’
यस आधारमा कोरोना लक्षण देखिने मानिसको हस्पिटलमा नेगेटिभ देखिएको खण्डमा पनि आइसोलेसलमा बस्ने वा क्वारेनटाइनमा बस्ने कार्य गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
कोरोनाका अनेक लक्षण
सामान्यतस् उच्च ज्वरो, रुघाखोकी र स्वास फेर्न गाह्रो हुनु कोरोनाका लक्षण हुन् । डा. पौडेलका अनुसार ९० प्रतिशत मानिसमा यी लक्षणका कारण आशंका गरे पनि अन्य १० प्रतिशतमा फरक फरक किसिमका लक्षण देखिन्छ ।
‘कोरोनामा ९० प्रतिशतमा उच्च ज्वरो हुन्छ तर १० प्रतिशतमा फरक फरक किसिमका लक्षण देखिएको छ’, पौडेलले भने, ‘कसैलाई बान्ता हुने, कसैलाई पखाला लाग्ने, थकान लाग्ने, गन्ध थाहा नपाउनेलगायतका लक्षणहरू पनि देखिने गरेका छन् ।‘
नेपाल सरकारलाई मेरो तिन सुझाव
१.सरकारले धेरैभन्दा धेरैलाई टेस्टिङ गर्ने, सम्भावित ब्यक्तिहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट (उपचार ) दायरालाई पराकिलो बनाउने काममा ध्यान दिने । छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेसंगै सरकारले सिमाना क्षेत्रमा चोक जाँचलाई थप कडाई गर्ने सबै क्षेत्रमा कोरोनालाई कन्टेनमेन्ट गर्न आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको ब्याबस्था गर्ने
२.सरकारले पब्लिक (जनता)लाई सबैलाई जनचेतजनाको काममा ध्यान दिएर स्थानिय तहसम्म प्रभाबकारी रुपमा सबैमा जनचेतना फैल्याउने काम छिटो छरितो हिसावले जनतासम्म जनसचेतनाको कामलाई तिब्रता दिने काम गर्ने । सरकारले जनतालाई कोरोनासंग लड्न सक्षम रहेको सबै जनतालाई स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहेको भन्ने जनताहरुलाई आश्वस्त पर्ने काम लाग्नु पर्ने ।सम्भावित जोखिमलाई मध्येनजर गर्दे त्यसको पुर्व तयारी गर्ने ।
३.कोरोनासंग फन्डलाईनमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हैसला बढाउने काम गर्ने, हामी संग निदान र उपचार गर्ने क्षमता छ भनेर आश्वस्त पार्ने, सुरक्षाका साधनहरु पीपीए लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री र औषधीहरुको अबस्यक मात्रामा उपलब्ध गराउने ।आसियू सहितको कोरोना विशेष अस्पतालको हरेक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने । तत्काल सरकारले प्राइभेट तथा पब्लिक क्षेत्रलाइ समन्वयगरि सबैलाई परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्ने ।
कोभिड १९ को असर कस्तो मानिसको कसरी मृत्यु हुन्छ ?
हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ, त्यही क्षमताका आधारमा व्यक्तिलाई भाइरसले आक्रमण गरे पनि मानिस बिरामी हुँदैन । त्यो भनेको धेरै रोग हामीले थाहै नपाई निको हुन्छ । हामी बिरामी हुने या कुनै रोग लाग्ने भनेको हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु मुख्य कारण हो । अहिले कोभिड १९ का कारण जति पनि मानिसको मृत्यु भएको छ, उहाँहरूमा पहिलेदेखि नै अन्य रोग हुनुको कारण हुन सक्छ । यो रोग लागिहाल्यो भने मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना ९० प्रतिशत कम हुन्छ । अन्य फ्लु भन्दा यो खतरनाक भएका कारण मानिस बिरामी परेको र मृत्यु भएको अवस्था छ । त्यसैले फ्लुका कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने होइन । हालसम्म हामीलाई धेरै पटक रुघाखोकी लागेको छ, त्यो पनि एउटा भाइरस हो तर कोरोनाले सीधै फोक्सोमा असर गर्छ, अनि निमोनिया हुन्छ र अक्सिजन नपुगेर मानिसको मृत्यु हुन्छ । मृत्यु हुनुपूर्व मानिसको अनुहार र ओठ नीलो भएको हामीले देखेका छौं । त्यो भनेको शरीरमा अक्सिजन नपुगेर हो, हो त्यसैगरी यो भाइरसले आक्रमण गरेपछि मानिसलाई श्वास फेर्न निकै कठिन हुन्छ अनि मृत्यु हुने गर्छ ।
ज्वरो आयो भने कोरोना लाग्यो भन्ने सुनिन्छ, त्यही हो ?
होइन, ज्वरो आउँदैमा कोरोना लागेको भन्ने हुँदैन । तपार्इंलाई सुरुमा यसले घाँटीमा समस्या देखाउँछ अनि ज्वरो आउँछ । त्यसपछि तपाईंलाई रुघाखोकी पनि लाग्न सक्छ । उच्च ज्वरो आयो र रुघाखोकी लाग्यो भन्दैमा कोरोना भयो भन्ने हुँदैन । तर, तपाईंलाई शंका लाग्छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानु पर्छ । आशंका भए सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।
कोरोना भएको कुनै लक्षण देखियो भने अहिलेको परिस्थितिमा तुरुन्तै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यही एकान्त अर्थात् एक्लै बस्ने प्रक्रिया भनौँ या त्यही बसाइलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन भनिन्छ । यदि, तपाईंलाई यो रोग लागेको केही लक्षण देखियो भने सम्भव भए एक्लै बस्नुस् अनि आफूलाई सुरक्षित राख्नुस् । तपाईं आफू त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नाले तपाईंसँगै अर्को व्यक्तिलाई पनि सुरक्षित राख्नुहुनेछ । त्यो भनेको तपाईंको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका कारण तपार्इं यो रोगसँग लड्न सक्नुहुन्छ तर प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, धेरै उमेर भएका कुनै औषधि प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई तपार्इंले भाइरस सार्नुभयो भने त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ । यसर्थ सम्भव छ भने एउटा कोठामा बस्नु, नत्र दुई÷चार हात पर रहेर घरमै बस्नुस् । हाछ्युँ गर्दा तपाईंको हाछ्युँको छिटा अरूलाई नपर्ने गरी बस्नुस् । तपाईंलाई थप असहज हुँदै गयो भने अस्पताल जानुहोस् । अस्पताल जाँदा तपाईंले हातमा पञ्जा र मुखमा मास्क लगाउनुस् अनि अस्पताल पुगेपछि पनि अन्य व्यक्तिसँगको केही दूरीमा बस्नुहोस् ।
घरमा बस्दा के–के ख्याल गर्नुपर्छ ?
घरमा बस्दा प्रोटिन र भिटामिन सी भएको खाना खानुपर्छ । तातो चिज खाने, प्रशस्त पानी पिउने साथै व्यायाम गर्न जरुरी हुन्छ ।
कोरोनाबाट जोगिन के गर्नुपर्ला ?
यसको औषधि पत्ता लगाउनका लागि प्रयास भइरहेका छन् । तर, आजको भोलि औषधि पत्ता लाग्ने सम्भावना निकै कम छ । यसैले अहिले घरमै बस्नु अचुक उपाय हो । पहिलो औषधि नै त्यही हो । त्यो भनेको तपार्इं संक्रमित हुनबाट जोगिनु हो भने अरूलाई पनि यो भाइरसबाट बच्न सहयोग गर्नु हो । यो भाइरसको भ्याक्सिन बन्न अझै ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ । यसैले घरमै बसौं, सही सूचना आदानप्रदान गरौं । नआत्तिऔं, नअत्याऔं ।
मास्क, पञ्जालगायतको प्रयोग कसरी गर्ने ?
यदि, तपाईं घरमै हुनुहुन्छ र अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्कमा जानुहुन्न भने एक पटक प्रयोग गरेको मास्क पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ । तर, सार्वजनिक रूपमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ भने तपाईंले एक पटक प्रयोग गरेको मास्क अर्को पटक प्रयोग गर्नुहुन्न । मास्कलाई अर्कोपट्टि फर्काएर लगाउने गरेको पाइन्छ, त्यो झन् सबैभन्दा खतरा हो । अनि तपाईं घरबाहिर निस्कनुहुन्छ भने हातमा पञ्जा लगाएर निस्कनुस् । कुनै पनि चिज छोएपछि या कुनै काम गरेपछि आँखा, नाक र मुखमा सीधै हात नलैजानुस् । यसो गर्दा तपाईं यो रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ । मास्क धोएर लगाउनु हुँदैन । पञ्जा भने धुन मिल्छ ।
बच्चालाई यसबाट कसरी जोगाउने ?
सामान्यतया बच्चालाई यो भाइरस सर्दैन । यो भाइरसले पाको उमेरका व्यक्तिलाई बढी असर गरेको छ । त्यो भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु नै मुख्य कारण हो । कोरोनाले हालसम्म बालबालिकालाई असर गरेको देखिएको छैन । यसको मतलव बालबालिकालाई यो रोग नै लाग्दैन भन्नेचाहिँ होइन । हामीले बालबालिकालाई संक्रमित व्यक्तिको नजिक नलैजाऔं । बच्चालाई धेरै व्यक्तिले लिने काम पनि नगरौं ।
यो रोग लागेर १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सार्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ तर जोगिनु भने पर्छ । भाइरस लागेको व्यक्ति ३÷४ हप्तासम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भन्ने मैले पनि सुनेको छु । अहिलेसम्मको प्राक्टिस हेर्दा १४ दिनभन्दा बढी बस्नु पर्दैन । यो भाइरस लागेर १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बसिसकेपछि फेरि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन । सामान्यतः एक पटक लागेको मान्छेलाई यो रोग अर्को पटक लागेको देखिन्न । त्यो भनेको सम्बन्धित व्यक्तिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित गरिसकेको हुन्छ । कसै–कसैलाई कुनै लक्षण नदेखिएर पनि कोरोना भाइरस निको भएको हुन सक्छ ।
प्रस्तुती: सिता रेग्मी
यो पनि हेनुहोस्:अमेरिकामा ‘फ्रन्टलाइन’ मा खटिएकी शिखाको अनुभव: ‘परिवारले जागिर छोड भन्छन् तर दिलोज्यान दिएर उपचार सेवामा खटिएकी छु’
Previous articleअमेरिकी गुप्तचरको दावी: ‘कोमामा उत्तर कोरियाली नेता किम गम्भीर खतरामा’
Next article‘लकडाउन’ मा २० वटा महिला हिंसाका उजुरी